အဆင်ပြေ5ဓါးသွား slicer ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်အစားအစာလိမ်လိမ်
5 Blade ခရု Slicer, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခရု Slicer ပတ်ရစ်တတ်သော သုပ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲနှင့်5Blade နှင့်အတူဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲအီတလီခေါက်ဆွဲဥရောပနိုင်ငံ, Make ရန်။
5 Blade ခရု Slicer ကျန်းမာစားစောင့်ရှောက်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။5လဲလှယ်ဓါးသွားအတူ, လတ်ဆတ်တဲ့အသီးအပွသုံးပြီးမိနစ် curly ခေါက်ဆွဲ, လိမ်ပွေီးမှနှင့်တော်တော်လေးဖဲကြိုးဖန်တီး vegetables.Perfect အသီးအပွ / ပန်းသီးနဲ့တူဟင်းသီးဟင်းရွက်, ကြက်သွန်နီ, မုန်လာဥနီ, zucchinis, သခွားသီး, ဂေါ်ဖီထုပ်, beetroot, မုန်လာဉဝါ, rutabagas, သခွားသီး, မုန်လာဥအဘို့, အာလူး, ချိုမြိန်အာလူး, squash နှင့်ပိုပြီး။
5 Blade ခရု Slicer, ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ် slicer လိမ်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခရု Slicer, သွေးတွေစီးထွက်လာနှင့် dicing အသုံးပြုခြင်းမှအချိန်ကုန်သက်သာ diet.Also လျင်မြန်စွာဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်နှင့် coleslaws စေနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲနှင့်အတူ easily.Replace မြင့်မားသော carb ခေါက်ဆွဲနှင့်သင်တစ်ဦးအနိမ့် carb အပေါ်များမှာပင်လျှင်အားလုံးသင့်ရဲ့အစားအစာကိုခံစား, gluten-အခမဲ့ သမားရိုးကျနည်းလမ်းများ။ နေဆဲအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့သဘာဝအလျောက်အာဟာရနှင့်သတ္တုဓာတ်ထိန်းသိမ်းနေချိန်မှာသင့်ရဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပါးစပ်-ရေလောင်းကြည့်ရှုမည်!
ကို ABS + PP + PS + S ကို / S က
အဆိုပါလိမ် slicer ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်:
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခရု Slicer လိမ်5Blade နှင့်အတူ, သုပ်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲအီတလီခေါက်ဆွဲဥရောပနိုင်ငံ Make ရန်။
1.five ဓါးသွား (2mm-ကျယ်ပြန့် Ultra-ပါးလွှာ strands, 3mm-ကျယ်ပြန့် strands, 5mm-ကျယ်ပြန့် strands နှင့် 7mm-ကျယ်ပြန့် strands ။ )
လိမ် Slicer စုံလင်သောဖဲကြိုးသို့မဟုတ်ပါးလွှာ strands လျှော့ချတစ်ဦးချင်းစီ၏5ကွဲပြားခြားနားသောဓါးသွား, အတူလာပါတယ်။ (ရှည်ရှည် spaghetti ကဲ့သို့သောကြောင်လိမ် strands ဖန်တီးခြင်းနှင့် zucchini ခေါက်ဆွဲ, ဟင်းသီးဟင်းရွက် spaghetti နှင့် curly fries ဘို့ပြီးပြည့်စုံ) နှင့်ဖဲကြိုးဖြတ်တောက်မှု (ရှည်လျားထူလိမ် strands) shredding အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိမ်သုံးစွဲဖို့ကအလွန်လွယ်ကူပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောအောင်, သင့်ကောင်တာသို့မဟုတ်စားပွဲပေါ်တွင်တည်ငြိမ်မှုများအတွက်အစွမ်းထက်စုတ်ယူခြင်းခွကေိုရှိပါတယ်! ရုံပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနေရာနှင့်သင်လှီးဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။
သင်ဤလိမ် slicer အကြောင်းပိုမိုဂရုစိုက်စေခြင်းငှါ
ပတ်ရစ်တတ်သော သင် style.You နိုင်တိုင်းဖြတ်ဘို့လိုအပ်သင့်လျော်သောဓါးသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဓါးသွားဖြတ်တောက်၏5စတိုင်များ (2mm-ကျယ်ပြန့် Ultra-ပါးလွှာ strands, 3mm-ကျယ်ပြန့် strands, 5mm-ကျယ်ပြန့် strands နှင့် 7mm-ကျယ်ပြန့် strands ။ ), နှင့်အတူ ခေါက်ဆွဲရန်, စူပါသုပ်အတွက်ပန်းသီး, သစ်တော်သီး, အာလူး, မုန်လာဥနီ, သခွားသီး, zucchini, beetroot နှင့် more.Ideal များအတွက်ကျန်းမာ, အမြန်-ထမင်းချက်အခြားရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးသောအရွယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခေါက်ဆွဲ, သုပ်, ခေါက်ဆွဲနှင့် more.Suitable ဖန်တီးရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သို့မဟုတ် သည်အခြားဟင်းလျာများတစ်အိမ်ရှင်။
အဆိုပါလိမ် slicer လုပ်ကိုင်ရန် 2.How?
၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းမှာစုတ်ယူခြင်းခွက်မျက်နှာပြင်မှပူးတွဲပါဒါကြောင့်ပထမဦးစွာပေါ့ပေါ့တန်တန်နေတဲ့တည်ငြိမ်ချောမွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ slicer နှိပ်ပါ။
ပြီးတော့တစ်ဦးဓါးကိုရွေးချယ်ပါကအသံထှကျရာအရပ်သို့လက်သည်သည်အထိ slicer ရဲ့ဓါးကိုင်ဆောင်သူသို့လျှော။ တိုက်ရိုက်ဓါးရဲ့ချွန်ထက်မျက်နှာပြင်ကိုထိကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ဂရုစိုက်ပါ။
တတိယကတော့ slicer ရဲ့အစားအသောက်ကိုင်ဆောင်သူသို့အသီးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက် Secure ။
နောက်ဆုံးတွင် slicer ဆီသို့အသီးသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အပိုင်းအစရွှေ့ဖို့လှည့်လက်ကိုင်လှည့်ပါ။
သင့်ရဲ့ဗီတာမင်စားသုံးမှုတိုးမြှင့်ဖို့ 3.Helpful လမ်း
4.Enjoy သင့်ရဲ့မုန့်ညက် & တိုးတက်ကောင်းမွန်သင့်ကျန်းမာရေး
သတိ:ဓါးသွားထက်သောများမှာ! အားလုံးတစ်ကြိမ်မှာသွားဓါးသွားကနေသင့်ရဲ့လက်ချောင်းစောင့်ရှောက်ပါပထမဦးဆုံးသုံးစွဲခြင်းမပြုမီနွေးရေနဲ့အပျော့စားသန့်ရှင်းရေးအေးဂျင့်နှင့်အတူအပေါငျးတို့သလိမ်မယ့်အစိတ်အပိုင်းများကိုရှင်းလင်းဖို့သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဂရုတစိုက်အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုခန်းခြောက်။
ဤသည်ပစ္စည်းပစ္စယအံ့သြဖွယ်ပါ! ကိုယ့် zucchini ခေါက်ဆွဲလုပ်မနေ့ကကကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်အသုံးပြုနိုင်အောင်လွယ်ကူသောပါ! ဒါဟာတဦးတည်း zucchini လုပ်ဖို့စက္ကန့်ကြာမှသာ! အရည်အသွေးလည်းအလွန်ကောင်းသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အတူ4ဓါးသွားအတူလာပါတယ်။ အံ့သြစရာကုန်ပစ္စည်း!
ဒီလိမ် slicer လက်ညှိုးကိုဖြတ်တောက်စိတ်မပူပါနဲ့မပိုကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
လိမ်တကယ်ငါ၏အကျန်းမာစားနှင့်ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ ငါ၏အသုပ်တော်တော်နှင့်အရသာစေရန်ပျော်စရာဖြစ်ထွက်နှစ်မြောက်မွေးနေ့။ လိမ်အသုံးပြုသောဘယ်တော့မှမ; ဒါပေမဲ့ဒီတစ်အံ့သြစရာပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကြည့်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုချစ်စရာပုံစံမျိုးစုံသို့အသီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလျှော့ချနှင့်သင့်ကလေးတွေစားဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ သုံးစွဲဖို့က၎င်း၏တော်တော်လွယ်ကူပါတယ်, သင် spiralizing နေကြတယ်ဆိုတာကိုပေါ် မူတည်. ညှိနှိုင်းမှုတစ်နည်းနည်းယူပေမယ့်ဓါးအားဖြင့်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ကျိန်းသေပိုမြန်မယ့်ပေမည်။
ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်, အလိမ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အခြားပုံစံမျိုးစုံကိုချစ်။ သငျသညျလျှပ်တပြက်အတွင်းအများဆုံးအံ့သြစရာသုပ်သို့မဟုတ် coleslaw စေနိုင်သည်။ များလွန်းမီးဖုတ်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက်ချစ်ပ်အောင်ဘို့ nice ။ တစ်ခါတလေအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အပိုငျးပိုငျးနှငျ့အတူတစျခုလုံးအရာမှထွက်ဆွဲယူချင်ကြပါဘူး, ဒါပေမယ့်အဆင်ပြေဘို့ရေခဲသေတ္တာအိတ်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့ကွဲပြားခြားနားပုံဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအများကြီးအောင်ကြိုးစားကြပေလိမ့်မည်။